I-Spirit Aim Magic Beacon Lapel Pin yendalo, ubuciko, ubuhle, i-rem - World of Amulets
I-Spirit Aim Magic Beacon Lapel Pin yendalo, ubuciko, ubuhle, isusa amabhlogo nogqozi
Kusele izinto eziyi-87
Inhloso yomoya ophelele wabantu bokudala. Uma ungumdali, le yi iphini le-lapel intelezi engakusiza. Injongo yoMoya ingakusiza ngezinto eziningi ezingenayo ngenqubo yokudala. Inhloso ingakhazimulisa ubuhlakani bakho ukuze uthole izindlela eziningi zokusebenzisa amathalente akho, Inhloso ingakusiza ukususa amabhulokhi, I-Spirit Aim ingcweti yangempela ekususeni izivimbelo ezikubambezelayo
I-Ajenda engakholeki futhi ingakusiza ukuthi ubhale izindatshana ezihehayo, izincwadi zokuthengisa noma izincazelo zomkhiqizo. Inhloso ithandwa kakhulu ngabalobi abafuna ugqozi.
Iphini le-lapel line- Okukhethekile ukuqoshwa ngemfihlo ekhethekile u-Enn ukubiza i-spirit Aim kanye nezinye izigaxa ezikhethekile zokubopha.
Thola umoya wakho Aim iphini le-lapel namuhla futhi umvumele akusize ucwebezele ngaphezulu
Iphinikhodi edalwe ngumculi odumile wobucwebe u-Adrian Del Lago